ITYALA LIKALOGAN HUNTZBERGER NJENGOBOYFRIEND OBALASELEYO KARORY GILMORE - ALEXIS IBLEDEL
Leia Organa Ngokubanzi
Umdaniso Wegalactic Ucimile
Ityala likaLogan Huntzberger njengoBoyfriend oBalaseleyo kaRory Gilmore
Omnye wemidlalo endiyithandayo ngu ukuxoxa Amantombazana aseGilmore kwaye ndiyithatha njengomdlalo ngenxa yokuba ufuna ukucinga ngokukhawuleza, ukulawula ukuphefumla okunamandla, kunye nokukwazi ukuthatha intlungu eninzi. Eyona nto ibuhlungu kuzo zonke iingxoxo: yeyiphi inkwenkwe kaRory ocinga ukuba yeyona ilungileyo? Ngoku ndinguLogan (noChristopher) fan, kodwa emva kokufunda Amantombazana aseGilmore: Imbali yeNkcubeko (Imbali yeNkcubeko yeTelevishini) nguLara C. Stache noRachel Davidson, ndikhunjuzwe ngendlela uLogan angayithandi ngayo ifonti. Ke bendifuna ukubeka ingxoxo yam ukuba kutheni inguLogan Huntzberger, umntu ozijongela phantsi yena, ngubani oyena mfana uthandana noRory Gilmore. Okanye ubuncinci ayisiyonto imbi kakhulu.
Ngoku xa abantu besithi bayamthanda uRory, uninzi lwamaxesha bathatha malunga ne-pre-college Rory. Phambi kwekholeji, uRory wayengumntu osebenzayo nosengqiqweni, kodwa xa esiya eYale kwaye ahlawule umntu i-20 yeedola ukuze akwazi ukuhlala phantsi komthi othile, uRory uyahlekisa kangangokuba uLorelei ufuna ukuba ngumzali. Amaxesha okugqibela aveza eyona nto iphambili malunga noRory: uyisnobhu. Iklasi kulo mboniso ngumdaka, kodwa enye yezinto ezichaza uLorelei (ubuncinci ephepheni) kukuba akanamathele kubomi obutofotofo awakhulela kubo.
Xa kuthelekiswa, uRory ngumntu othanda ukuba yinxalenye yeli hlabathi. Ngaba iyothusa kwaye ayonwabisi ngamanye amaxesha? Ngokuqinisekileyo, kodwa uRory uyakuthanda ukuba kwiindawo apho anokugqwesa khona kwaye abe ngumntu obonakalisa ukugqwesa. Icandelo lelo nguGilmore kwaye livela kulowo mthi wosapho. Isikolo sakhe samabanga aphakamileyo iChilton Preparatory School sasizaliswe ngabantwana abazizityebi, kodwa ke sasiyimeko yezemfundo kuphela kwaye ithi okuninzi olona tshaba lwakhe lukhulu yayinguParis, umntu owayenesiphiwo sobukrelekrele kwaye ingxabano yabo yayiyeyona nto iphambili. (Sikhetha ukungamhoyi uTristan kuba wayengubani nokuba kunjalo?)
I-Yale, nangona kunjalo, inqanaba elitsha. Kuba ngokungafaniyo neChilton apho uRory amkelwe khona ngenxa yamabanga akhe kunye neetalente zemfundo, inxenye yesizathu sokuba uRory abe seYale kungenxa yokuba ulilifa. Oku akukunciphisi ukuba ulumkile, siyayazi loo nto (nangona engakhange aqonde ukuba ufuna i-extracurriculars ye-Ivy Leagues kodwa… nantoni na). Nangona kunjalo, iiGilmores ezikwiYale zibuyela emva kwizizukulwana. Usapho lunikela khona, ungumzukulwana wabalumni. Ukufumana kwakhe konke kwakukhuselekile mzuzu wokuzalwa kwakhe. Olo hlobo lobutyebi, ilungelo, kunye nolindelo lokugqwesa ayisiyiyo into enokuqondwa nguDean okanye uJess, kodwa yinto uLogan anokuyenza.
Xa siqala ukudibana noLogan ungumpundu. Uyi-prankster, ubiza uRory Ace (isono uninzi alunakundixolela… Ndingene kuso), kwaye uyimbalasane yelungelo. Nangona kunjalo, ngokungafaniyo nesinhanha sabantu esibabonayo kumdlalo, uyazazi izibonelelo zakhe emhlabeni kwaye akazami ukuzenza ngenye indlela. Akakhulile kwaye uRory uyazi ukuba ngokupheleleyo xa beqala ukuphuma uyamxelela, ukuba akangomntu ozinikeleyo.
Emva kwethutyana, ukuqaphela ukuba ukungakhathali akuyonto yakhe kwaye uyayiqonda kwi Kodwa ndinguGilmore! uneemvakalelo zokwenyani kuRory, bobabini banquma ukuba nolwalamano olukhethekileyo. Esi sisiqendu apho sibona ukuba uRory unamathele kangakanani kulowo akuyo ngelensi yoluntu oluphezulu:
IBALI: Kodwa kutheni bengacingi ukuba ndanele ngokwaneleyo?
IBALI: Ndiyathetha, ndinguGilmore! Ngaba bayayazi loo nto? Ookhokho bam beza ngoMayflower!
LOGAN: Ungazami ukuyihlalutya, akukho mvumelwano okanye isizathu!
IBALI: Bendinetheko eliphumayo! Ndaya kuChilton, noYale, kwaye kutheni belungile kuJosh? Ndiyathetha, akathethi kwanto! Ubuncinci ndiyibonile iVelazquez!
Uninzi lomboniso, uRory akazange akhe alwele into ngeli nqanaba. Nokuba ubutshaba bakhe neParis malunga neHarvard buphelile ngokuphumelela kwakhe nangona iParis 1000% yasebenza nzima kunaye. Kubudlelwane bakhe bothando, bobabini uDean noJess babethe phithi yiyo ukusuka kwindawo yokutsiba ukuze amalungu abaphulaphuli alandele uRory kulo lonke umboniso, xa ekhala nge-Logan kwi-Live kunye ne-Diorama, kubuhlungu kuba siyazi ukuba uyakhathala kakhulu yena. Kodwa, wavuma ukuba kubudlelwane obungaqhotyoshelwanga kwaye wamthatha ngelizwi lakhe. Kwaye andicingi ukuba uRory akalunganga ngokuziva ulusizi kwaye ushiyekile ngenxa yokuba umntu omthandayo engakuthandi.
Kodwa nathi kufuneka siliqonde kwelinye icala, kwaye kuLogan, umntu ovumayo ukuba akazange abekho kubudlelwane bokwenyani, wenza ngendlela avakalelwa kukuba unakho ukwenza. Into ebalulekileyo kodwa, kukuba xa uRory yenza achaze indlela avakalelwa ngayo, uyaphendula. Uphendula umnxeba wokuba ngumfana athandana naye kuba yile nto afuna ukuyenza ukuba ukhetho kukuba kunye okanye hayi. Into ebaluleke kakhulu malunga nolwalamano lweLogan / Rory kukuba uyamphatha njengomntu omdala. Uyamthemba ukuba athethe ingqondo yakhe kwaye azenzele izigqibo. Ingxaki kukuba uRory uhlala engazi ukuba ufuna ntoni, kuba uninzi lobomi bakhe wayehlala ngaphandle kwemiceli mngeni enzima.
Izityholo ezininzi zibekwa ku-Logan kukhetho olubi lukaRory kuba engambambi ngesandla kwiimeko kunye nengcebiso yesilumko. URory ngumntu omdala. Wenza ukhetho kwaye ayiloxanduva lukaLogan ukuba ngumgcini wakhe, ngakumbi xa beqala ukuthandana.
Kukho abanye, nditsho noLara C. Stache noRachel Davidson, abathi umtsalane kuRory kuLogan unento yokwenza nemicimbi katata ngaphezulu kukaChristopher, kodwa ndicinga ukuba ibeka bonke abantu ababandakanyekayo. UChristopher noLogan bobabini ngabantwana abazizityebi abakhangeleka kakuhle, kodwa loo nto intle kakhulu apho uthelekiso luphela khona. I-Logan ibisoloko izama ukunyukela kweso sihlandlo xa kufikwa kwiimvakalelo zikaRory. Ubuye atyhalele umva.
Elinye lamaxesha endiwathandayo kukwazisa iLorelai Planetarium apho uRory abhala khona esi siqwenga somgwebo malunga nomsitho wenkampani ye-Intanethi entsha yeLogan. Wonzakele ngenxa yokuba evakalelwa kukuba uthetha ngaye kwaye ehlekisa ngokufezekisa kwakhe, nangona benemvelaphi efanayo.
LOGAN: Ngokuchanekileyo, ndiyathetha ukuba uphuma phi ngokuziphatha kakuhle?
IBALI: Ayisiyiyo le nto bendizimisele ukuyithetha kwaphela.
LOGAN: Ucinga ukuba uyiyo ngokucacileyo. Ngoba? Ngenxa yokuba ufunda i-Ironweed? ‘Kuba ubonile uNorma Rae?
LOGAN: Vuka Rory nokuba uyathanda okanye awuthandi, ungomnye wethu. Uye wayokulungiselela isikolo. Yiya kuYale. Ootatomkhulu bakho bakha yonke into ngeenkwenkwezi ngegama lakho.
IBALI: Oko kwahlukile, kulungile? Akufani nokuba ndiphila nge-5 yezigidi zeedola zokuthenjwa ngabazali bam.
LOGAN: Ewe kulungile, awuyikuhlawula ngqo irente, nokuba.
IBALI: [Ehlekisa] Ndikujijile, Logan.
Ekugqibeleni baxolelana kwaye kwindawo, banencoko yabantu abadala. Ngelixa ndiyazi ukuba ixesha lesixhenxe liyantlukwano, ndiyayithanda into yokuba ivumele uLogan noRory ukuba babe nolwalamano lwabantu abadala ngaphandle kothando loonxantathu, ngaphandle kokwahlulahlula, kwaye kwabonisa ukuba (wow) uRory unokuba kubudlelwane nomntu ongaziva ngathi umdlalo wabo weemvakalelo wawuthetha ukuba kufuneka babe sisiqwenga nje. Sikwabona ukuba uRory ngokwenene ungumntu wakhe. Ngubani awayencancisiwe, kodwa kwavakala ngathi yinto yendalo, ukuvela kwendalo kumlingiswa ochazwe kukugqibelela kwakhe.
U-Logan akazange amphathe u-Rory ngokungathi ugqibelele kwaye oko kungavakala kungavakali, kodwa ndicinga ukuba kuphela kwendlela onobudlelwane bokwenyani ngayo. Ndihlala ndiziva, nditsho nokubukela kwakhona, ukuba uJess noDean bamphethe uRory njengebhaso eliza kuphumelela. Ndikhumbula uDean elusizi kwaye ethetha ngoRory ngendlela efanayo alusizi ngayo, enxila wakhala ngeLogan. U-Logan wabona uRory njengomntu, umntu amthandayo, umntu amhloniphayo, kodwa naye wayenokwakhe ukukhula kwaye akunyanzelekanga ukuba amnyathele akwenze.
Ukujongana nesiqendu esidumileyo sooMolokazana ababuyela apho uRory afumanisa khona ukuba uLogan ulele nabahlobo bakadadewabo xa bethathe ikhefu. Okokuqala, loo mantombazana ayengcolileyo ngokuthetha loo nto. Xa elinye lamantombazana lihamba wena nguRory-Rory kwaye ulahle igama elingu-r, uthanda ukuba uyinto embi. Zingaphi iiRorys ozaziyo? Kwakhona, inyani yokuba incoko iyaqhubeka ayinzima.
Ngaba uLogan wayefanele alumkise uRory malunga noku? Bekufanele ukuba ulele nala mantombazana? Ndinengqondo ezimbini ngayo. Ndiva ngathi ukuba uLogan wayecinga ngokunyanisekileyo ukuba bohlukene kwaye wayengazi ukuba kuqhubeka ntoni, ke wayenenkululeko yokulala naye nabani na awayefuna kwaye uRory wayenenkululeko efanayo. Le yincoko ekufanele ukuba babenayo xa bebuyelana, ngenxa yezizathu ezininzi, kubandakanya nokujonga ii-STIs (kuba amaqabane kufuneka eyazi imbali yabo yezesondo), kodwa ngenxa yokuba le ngumabonakude kwaye akukho mntu unezo ngxoxo Andazi ukuba. Ndicinga ukuba babengengabo abanxibelelanisi abalungileyo ekuqaleni kwabo ukuba babe sisibini ukuze bobabini baphazamise.
Oko kuyathethwa, ukuba usekhefini (njengekhefu lokwenyani, hayi ikhefu le-Ross 2-yesibini) emva koko usekhefini. Bendingayi kulindela ukuba ukuba intombi yam eyintombazana ililungu leqela labatshatileyo elinabafazi abadala abakhule ngokupheleleyo, ukuba baqale nje ukuthetha ngendlela ababelala ngayo nam? Yinto nje bonkers kum. Ndicinga ukuba bekufanele ukuba babenencoko, kodwa ndicinga ukuba akuqhelekanga ukubabeka amabala abantu xa besabelana ngesondo xa bekwikhefu, ukuba banoxanduva.
Ndiyazi ukuba ngumbono ophikisanayo kwaye ndijonge phambili ekufundeni inkcaso.
utolo ugcine iintshaba zakho zisondele
Ngapha koko, uLogan ufunda kakuhle kum kuba uziva ngathi umdala. Kanye njengo Mnu Ukwabelana ngesondo kunye neSixeko, ungazenza kakuhle iziphene zakhe, kodwa ukungazenzi kakuhle akuthethi ukuba kuyamphika ekubeni ngumdla wothando. Ngamanye amaxesha ezona zinto zibalulekileyo zothando zezabo basixelela malunga ne-protagonists zethu, njengoko u-Thatha ethathile malunga neBig.
Ndikhalimela inguqulelo yemvuselelo yeLogan. Andimazi.
Amantombazana aseGilmore: Imbali yeNkcubeko (Imbali yeNkcubeko yeThelevishini) iphuma ngoSeptemba 15, 2019.
Nceda wabelane ngazo zonke ezingathandwayo / ezithandwayo Amantombazana aseGilmore ithatha ngezantsi. Ndijonge phambili ekuzifundeni.
(umfanekiso: Warner Bros / CW)
-UMary Sue unemigaqo-nkqubo engqongqo yokuphawula engavumiyo, kodwa ayikhawulelwanga, ukuthukwa nabani na , Intiyo nentetho ebhuqayo. Ukuba uthenga into ngekhonkco lethu, uMary Sue unokufumana ikhomishini yokusebenzisana.-
M Ebusuku Shyamalan
Ibali Eloyikekayo Lasemelika
dr ilitye emva kwabadlali belizwi
Utolo lweMelika ninja warrior
I-batman kunye ne-catwoman fan art
idayari yekati elusizi
utolo oluluhlaza kunye nabasebenzi